Qaraxii Maanta ka Dhacay Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne |
Qaraxii Maanta ka Dhacay Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Beledweyne
Afar ruux oo mid ka mid ah uu ahaa Askari Ciidamada Jabuuti ee Qaybta ka ah Hawl-galka Midowga Afrika ee Somalia ee AMISOM ka mid ah; ayaa ku dhaawacmay Qarax barqanimadii maanta ka dhacay Bar-koontarool oo ku Taalla Afaafka hore ee Garoonka Diyaaradaha Beledweyne ee Ugaas Khaliif.
Sidoo kale, Taliyaha ayaa xusay inay Arrintan u soo xireen tiro Dad ah oo ay ku jiraan Dad ka ag-dhawaa goobta uu Qaraxu ka dhacay, Waxaana uu intaa raaciyay in ay jiraan Dad ay tuhusan yihiin laakiin baaritaan lagu waddo.
Dhanka kale, Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in shan qof ay u xireen qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha Beledweyne, isagoo intaa raaciyay in dadka xiran ay ka mid yihiin Shaqsiyaad sida uu hadalkiisa u dhigay si weyn loo tuhusan yahay, wuxuuna eedda Qaraxan dusha uga tuuray Al-shabaab.
Yuusuf Daba-geed ayaa xusay in qaraxii maanta ka dhacay garoonka uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin ahaanba Amniga Garoonka oo sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu billaabi doono duulimaadyadii Garoonka.
Qaraxaan ayaa midkii ugu horreeyay noociisa oo ka dhacay Gudaha Garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif, ayaa siweyn looga hadal-hayaa degmada Beledweyne, madaama dad badani sii xasuustaan qaraxii bishii hore lagu bartilmaameedsaday diyaarada Daallo Airline oo ka duushay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Ugu dambeyn, Hay’adaha Ammaanka ayaa joojiyay Dhaq-dhaqaaqii Garoonka, Waxaana maanta dib u dhacay oo baaqday rakaabkii ka iman lahaa magaalada Muqdisho.